Xiddig ka tirsan kooxda Chelsea oo bishii Janaayo qarka u fuulay inuu ku biiro Juventus – Gool FM
(London) 9 March 2019. Sida wararku ay sheegaan xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ku dhawaaday inuu suuqii kala iibsiga Janaayo ku biiro naadiga Juventus ee dalka Talyaaniga.
Difaaca naadiga Chelsea ee Andreas Christensen ayaa la soo warinayaa inuu aad ugu dhowaaday inuu heshiis amaah ah ugu biiro kooxda Juventus bishii Janaayo, kaliya kooxdiisa ayaa heshiiskaas kansashay daqiiqadii ugu dambeysay.
Christensen ayaa kaliya saddex kulan oo horyaalka Premier League u saftay kooxda Blues xilli ciyaareedkan, Antonio Rudiger iyo David Luiz ayaana ah dooqa koowaad ee difaaca dhexe ee tababare Maurizio Sarri, kaasoo jecel inuu labadooda isku lammaaniyo.
Sida lagu daabacday Calciomercato kooxda Juve ayaa doonaysay inay dhammaystiro heshiis amaah ah oo ay ku soo qaadan lahayd xiddigan xulka qaranka Denmark ee Christensen suuqii kala iibsiga xiddigaha ee jilaalka, laakiin naadiga Chelsea ayaa markii ugu dambeysay go’aansatay inaysan ogolaanin inuu ka baxo 22-sano jirkaan.
Aabaha dhalay Christensen sidoo kalena ah Wakiilkiisa ee Sten Christensen ayaa sheegay bishii October in laacibkan uu doonayo inuu ka tagto garoonka Stamford Bridge bilowgii sanadkan 2019-ka haddii uusan boos joogto ah ka helaynin kooxda, taasoo aan dhicin.
Kooxda Barcelona ayaa sidoo kale lala xiriirinayey saxiixa xiddigan daafaca dhexe bishii Janaayo, kaasoo 40 kulan u ciyaaray naadiga Chelsea intii lagu guda jiray kal ciyaareedkii 2017-18.
Xilliga uu Macallin Jose Mourinho qabanayo shaqada kooxda Real Madrid oo la shaaciyey